Global Voices teny Malagasy » Manamafy Ny Krizy Ara-tsakafo Misy Ao Amin’ny Firenena ny Korontana Ara-politika Ao Borondi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Avrily 2017 13:42 GMT 1	 · Mpanoratra Liam Anderson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Borondi, Mediam-bahoaka, Politika, Sakafo
Tao anatin'ny volana vitsivitsy, niharan’ ny krizy ara-tsakafo  i Afrika Atsinanana . Ny toetr'andro tafahoatra sy mikorontana nateraky  ny toetr'andro ratsy  “La Niña -El Niño ” no niteraka tsy fisian'ny tahirin-tsakafo  sy nahatonga ny fiakaran'ny vidin-tsakafo  tao amin'ny firenena  maromaro, anisan'izany i Kenya sy i Tanzania . Manao fanairana ireo sampan-draharaha misahana ny Fanampiana , mitaky  hetsika avy hatrany mba hisorohana izay fiverenan'ny mosary  mahatsiravina tamin'ny taona 2011 tao Somalia.
Namely ny fambolena  ny tsy fahantarana mialoha ny haitraitran'ny toetrandro , ahitana orambe  sy hain-tany  maharitra ao Borondi. Niantraika tamin'ny fandehanana any an-tsekoly  ny tsy fahampian-tsakafo naterak'izany ary nitarika fahafatesana noho ny hanoanana . Tamin'ny volana Janoary, nanao fanadihadiana  sy niantso  fanampiana iraisampirenena ireo sampan-draharaha misahana ny vonjy aina maha olombelona, na dia tsy mety mamaritra ny toe-javatra ho vokatry ny “mosary” aza ireo minisitra fa aleony milaza ny teny hoe ‘tsy fahampian'ny ‘ famokarana ara-pambolena.
Araka ny filazan'ny Olucome [ONG  miady amin'ny kolikoly ao Borondi], tokony hiantso fanampiana iraisam-pirenena ny fanjakana mba hanamaivanana ny mosary
Eo amin'ny ampaha efatry ny mponina ao Borondi — tokony ho olona 3 tapitrisa — no voalaza  ankehitriny fa mila fanampiana ara-tsakafo. Niteraka famindran-toerana  ny tsy fahampian-tsakafo, ka olona maherin'ny 400 000 no lasa mpitsoa-ponenana  voasoratra anarana ao amin'ny Firenena Mikambana ary tombanana ho 150.000  ireo nafindra toerana ao anatiny.
Nilaza  ny manampahefana fa ny krizy ara-tsakafo ihany no anton'ny famindra-toerana. Na izany aza, tamin'ny volana Marsa, nitatitra  ny Radio Okapi an'ny ONU ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo fa noho ny korontana ara-politika no antony nitsoahan'ireo mpitsoa-ponenana vaovao ao amin'ny firenena. Nisy ireo efa niverina saingy mbola misalasala amin'ny antson'ny governemanta mba hiverina hody kosa ireo Borondey sasany an-tsesintany any Ogandà, milaza  izy ireo fa mbola manohitra ny fe-potoam-piasàna fahatelon'ny filoha Pierre Nkurunziza.
Nitarika  krizy ara-politika ny fanapahan-kevitry ny filoha Nkurunziza tamin'ny taona 2015 hijanona eo amin'ny fahefana taorian'ny fe-potoam-piasany faharoa, ka nanjaka tamin'izany ny “herisetra, tahotra, sy ny fitotonganana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary nihalalina ny hantsana ara-tsosialy”, araka ny nosoratan'ny Vondrona momba ny Krizy Iraisampirenena tamin'ny volana Mey 2016. Nilaza  ny Fikambanana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena ao amin'ny Firenena Mikambana fa raha niteraka olana ara-tsakafo ny faharatsian'ny toetr'andro, nanamafy izany kosa ny korontana ara-politika ao Borondi.
Efa mahazatra  ny tatitra momba ny tsy fahampiana sy ny fidangan'ny vidin’entana fototra ilaina andavanandro  – 13,8%  tamin'ny taona 2016, ary vao maika nanasarotra ny fifanakalozana isan'andro ny tsy fahampian'ny vola taratasy. Nisy fiantraikany tamin'ny fanafarana entana ny fitotongan'ny Franc, vola Borondi, manampy izany ny fihenan'ny famokarana sy ny vola miditra ka miantraika amin'ny maro amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fiakaram-bidiny. Nanamarika  anefa ny Rafitra Tambajotra Fampandrenesana Mialoha ny Mosary fa antenaina hampitombina ny vidin-javatra “ambony tsy mahazatra” ny voka-pambolena tsara kokoa amin'ny manaraka.
Manasongadina ny fiaintraikany isan'andro, namariparitra ny hasarotam-piainana  iainan'ny ankizy iray, mandeha mianatra anaty hanoanana, tsy afaka mividy zavatra ilaina andavanandro ilay bilaogera Bella Lucia Nininahazwe:
Nanampy ireo fanamby hafa mihatra amin'ny olona an-tapitrisany  ny fitomboan'ny trangan'aretina tazo  – noho ny fikorontanan'ny toetr'andro sy ny tsy fandriampahalemana, araka ny filazan'n y Fikambanana Manerantany misahana ny Fahasalamana. Nanambara ny fisian'ny valan'aretina  malaria [tazo] ny Minisitry ny Fahasalamana ao Borondi tamin'ny 13 Marsa. Nitatitra  momba ny fiakaram-bidim-piainana sy ny tsy fisiana mahatonga ny maro tsy mahatakatra ny fanafody ilaina isan'andro  ihany koa ny gazety Iwacu.
Anisan'ireo firenena mahantra indrindra manerantany i Borondi, noho izany, tsy dia manana loharanon-karena sy fahafahan'ny  fotodrafitrasa mamaly  sy manarina ny  krizy voajanahary izy. Niteraka tsy fahampian'ny tetibola izay nisy fiantraikany tamin'ny fepetran'ny fanjakana amin'ny tsy fahampian-tsakafo ny famerana ny fanampiana vokatry ny krizy ara-politika. Mijaly amin'ny kolikoly ihany koa ny firenena – laharana  faha 159/176 amin'ny tondro momba ny kolikoly taona 2016 avy amin'ny Transparency International izy – izay manohintohina ny fitantanam-panjakana.
Mihevitra ny hafa fa ny faharetana amin'ny dona no anisan'ny fahaleovantena ara-toekarena , araka ny nasongadin'ilay mpisera Twitter Emmanuel ho valinteny ho an'ny Minisitra Alain-Aime Nyamitwe ao Borondi niresaka  momba ny fifandraisana ara-diplaomatika.
Indrisy fa niharava nanomboka tamin'ny taona 2015 ny fifandraisana teo amin'i Bujumbura sy ny mpiara-miasa iraisampirenena. Tamin'ny faramparan'ny taona 2016, nanamafy ny fitokana-moniny i Bujumbura tamin'ny fampihenana ny fiarahamiasa  amin'ny Fitsarana Iraisampirenena Misahana ny Heloka Bevava sy ny Sampana misahana ny Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana, ankoatra ny hafa, ary nanakana  ny valiny mety amin'ny krizy ihany koa ny fisaratsarahan'ny iraisampirenena. Tsy nety noraisin'ny firenena ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nalefan'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambanana mba hanampy hametraka filaminana.
Voalaza  fa nipoitra vao haingana ireo vatana mangatsiaka maromaro, ary mitaky ny hanasaziana  izay tompon’ andraikitra ireo ONG lehibe malaza. Naneho ahiahy manoloana ny fitohizan'ny fanitsakitsahana zo  sy ny famoretana .ara-politika ny tatitra  avy amin'ny Sekretera Jeneraly vaovaon'ny ONU, Antonio Guterres, ho an'ny Filankevi-piarovan'ny Firenena Mikambana. Sahiran-tsaina ihany koa izy fa mety hirotsaka hofidiana faninefany ny filoha Nkurunziza, izay mety hanamafy ny disadisa.
Ho setrin'izany, nangataka  tamin'ny Firenena Mikambana ny filoha lefitra Gaston Sindimwo mba hanaisotra ny mpiasany rehetra ao Borondi, mitaraina fa disoim-baovao vaovao ireo tsikera. Niampanga an'i Rwanda sy ny Tandrefana, indrindra fa i Belzika ho mitetika ny fanonganana azy ihany koa ny manampahefana.
Miankina amin'ny fanjakana, ny fikambanana iraisampirenena ary ny ONG izay mahavita miatrika na fara faharatsiny miasa manoloana ny disadisa ny fepetra mahomby ao anatin'ny fotoana fohy mba hanampiana ireo manana filàna maika, alohan'ny hidirana amin'ny olana maharitra . Raha tsy izany, maro ireo mety hiatrika faharatsiam-pahasalamana sy famindran-toerana hafa indray noho ny korontana ara-politika misy ankehitriny miaraka amin'ny tsy fahampian'ny  sakafo sy ny fanafody.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/20/98494/
 krizy ara-tsakafo: http://reliefweb.int/report/kenya/east-africa-drought-situation-report-no-1-february-21-2017
 Afrika Atsinanana: http://www.dw.com/en/up-to-20-million-threatened-by-drought-in-eastern-africa/a-37580220
 toetr'andro ratsy: https://widerimage.reuters.com/story/after-the-floods
 Kenya sy i Tanzania: https://pesacheck.org/what-is-the-cause-of-rising-maize-prices-in-tanzania-f014e63e667d
 fandehanana any an-tsekoly: https://www.facebook.com/sosmediasburundi/posts/1245609422167761
 nanao fanadihadiana: http://www.rfi.fr/afrique/20170222-burundi-rapport-humanitaire-alarme-crise-alimentaire
 tsy fahampian'ny: http://www.rfi.fr/afrique/20170222-burundi-politiques-alertent-famine-crise-alimentaire
 Efa mahazatra: https://www.facebook.com/sosmediasburundi/posts/1238055776256459
 entana fototra ilaina andavanandro: http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/staple-food-prices-soar-by-up-to-two-thirds-in-bujumbura/
 araka ny filazan'n: http://www.afro.who.int/fr/burundi/press-materials/item/9345-mission-dinvestigation-des-flambees-de-cas-de-paludisme-sevissant-au-burundi.html
 fanafody ilaina isan'andro: https://www.nytimes.com/2017/03/27/world/africa/famine-somalia-nigeria-south-sudan-yemen-water.html?_r=0
 tsy dia manana : http://science.time.com/2011/01/04/a-tale-of-two-floods-shows-the-disaster-gap-between-rich-and-poor/
 manarina ny: http://www.iwacu-burundi.org/la-bad-vient-devaluer-le-burundi/
 mpiara-miasa : http://www.iwacu-burundi.org/englishnews/ngos-propose-sanctions-against-perpetrators-of-serious-human-rights-violations-in-burundi/
 fitohizan'ny fanitsakitsahana zo: https://www.facebook.com/sosmediasburundi/posts/1374865875908781